ညို့ချက်ပြင်းစွာ ဖမ်းစားနိုင်လွန်းအားကြီးတဲ့ ရွှေကစ်ရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းများ – Zeekwat Hot News
ညို့ချက်ပြင်းစွာ ဖမ်းစားနိုင်လွန်းအားကြီးတဲ့ ရွှေကစ်ရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းများ
ဒီဇိုင်နာ 👗Min Thet Saen ( Sweet and Smart ) ရဲ့ အရမ်းလှလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ခံ့ညားစွာလှပနေတဲ့ ရွှေကစ်ကို အမဲရောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့လိုက်ဖက်အောင် မိတ်ကပ် 💄May Oo (May Oo’s magic) က အလှဆုံးလိမ်းခြယ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာကြောင့် ရွှေကစ်ရဲ့အလှက ပိုမိုတင့်တယ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
အသွင်ဆန်းပြားတဲ့ ဖက်ရှင်အလန်းစားလေးနဲ့ လှနေခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်ရဲ့အလှဓာတ်ပုံများထက် ရွှေကစ်ရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းများက ညို့ချက်ပြင်းစွာ ဖမ်းစားနိုင်လွန်းအားကြီးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်ကပဲ ရွှေကစ်တစ်ယောက် ဂျပန်နိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရွှေကစ်အတွက် ပြည်ပခရီးစဉ်လေးဖြစ်ခဲ့ပြီး အစားအသောက်များကို စားရင်း ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက သိပ်လှတဲ့ ဖူဂျီတောင်ကြီးနဲ့အတူ ချစ်စဖွယ်ကောင်းအောင် ပို့စ်လေးတွေပေးရင်း ရွှေကစ်တစ်ယောက် အတော်လေး အေးချမ်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိစဉ်ကာလပတ်လုံး လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ နေရာဒေသများကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ တောက်လျှောက်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရက်ကြာရောက်နေတဲ့ ရွှေကစ်တစ်ယောက် အရင်ကထက် ပိုလှလာတယ်လို့ ပရိသတ်များက ထင်စမှတ်ပြုကြပါတယ်။
၀တ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို အားတက်သရော ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်နေပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများ၊ ကြော်ငြာများနဲ့ ပွဲအခမ်းအနားများကို တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လို့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ အချစ်ရေးမှာ အလွန်တည်ငြိမ်နေခဲ့ပြီး သူမရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်း ပရိသတ်များကို အသိပေးထားတာမျိုးလည်း မရှိသေးပါဘူး။
Source From Wutt Hmone Shwe Yi
ဒီဇိုငျနာ 👗Min Thet Saen ( Sweet and Smart ) ရဲ့ အရမျးလှလှနျးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ခံ့ညားစှာလှပနတေဲ့ ရှကေဈကို အမဲရောငျဖကျရှငျလေးနဲ့လိုကျဖကျအောငျ မိတျကပျ 💄May Oo (May Oo’s magic) က အလှဆုံးလိမျးခွယျပွငျဆငျပေးခဲ့တာကွောငျ့ ရှကေဈရဲ့အလှက ပိုမိုတငျ့တယျသှားစခေဲ့ပါတယျ။အသှငျဆနျးပွားတဲ့ ဖကျရှငျအလနျးစားလေးနဲ့ လှနခေဲ့တဲ့ ရှကေဈရဲ့အလှဓာတျပုံမြားထကျ ရှကေဈရဲ့မကျြလုံးဝိုငျးမြားက ညို့ခကျြပွငျးစှာ ဖမျးစားနိုငျလှနျးအားကွီးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။သိပျမကွာခငျကပဲ ရှကေဈတဈယောကျ ဂပြနျနိုငျငံကို အလုပျကိစ်စနဲ့ရောကျရှိခဲ့ပွီး ရှကေဈအတှကျ ပွညျပခရီးစဉျလေးဖွဈခဲ့ပွီး အစားအသောကျမြားကို စားရငျး ပြျောရှငျစခေဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံက သိပျလှတဲ့ ဖူဂြီတောငျကွီးနဲ့အတူ ခဈြစဖှယျကောငျးအောငျ ပို့ဈလေးတှပေေးရငျး ရှကေဈတဈယောကျ အတျောလေး အေးခမျြးနတော တှရေ့ပါတယျ။ဂပြနျနိုငျငံကို ရောကျရှိစဉျကာလပတျလုံး လညျပတျခဲ့တဲ့ နရောဒသေမြားကို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ တောကျလြှောကျမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံကို ရကျကွာရောကျနတေဲ့ ရှကေဈတဈယောကျ အရငျကထကျ ပိုလှလာတယျလို့ ပရိသတျမြားက ထငျစမှတျပွုကွပါတယျ။ဝတျမှုနျရှရေညျဟာ အနုပညာလုပျငနျးမြားကို အားတကျသရော ကွိုးကွိုးစားစားလုပျကိုငျနပွေီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမြား၊ ကွျောငွာမြားနဲ့ ပှဲအခမျးအနားမြားကို တကျရောကျနတော ဖွဈပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လို့ ဝတျမှုနျရှရေညျဟာ အခဈြရေးမှာ အလှနျတညျငွိမျနခေဲ့ပွီး သူမရဲ့အခဈြရေးအကွောငျး ပရိသတျမြားကို အသိပေးထားတာမြိုးလညျး မရှိသေးပါဘူး။
သူမရဲ့ လက်တွဲဖော် အိမ်ထောင်ဖက် ကို မောင်လေးတွေ ထက် အားကိုးရတဲ့ ကိုကို​တွေကိုပဲ ​ရွေးမယ်​ဆိုတဲ့ ​မေမြင့်​မိုရ်
Hey Buddy!, I found this information for you: "ညို့ချက်ပြင်းစွာ ဖမ်းစားနိုင်လွန်းအားကြီးတဲ့ ရွှေကစ်ရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းများ". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/913. Thank you.